Andraharo: nanampy ireo sahirana ny Happy Women | NewsMada
Andraharo: nanampy ireo sahirana ny Happy Women
Ankatoky ny Krimasy teo, tsy nanadino ireo fianakaviana « hadino » eny Andraharo ny fikambanana Happy Women na vondron’ireo vehivavy miasa ao amin’ny Novo-Comm. Vao mainka hita mibaribary ny tsy fitovian’ny fari-piainana, indrindra amin’ny andro fety toy izao, ka nanao izay tandrify azy ny Happy Women amin’ny fanampiana ireo fianakaviana sahirana.
Niezaka ny vondrom-behivavy nanatsara ny tandrifin’ireo fianakaviana sahirana ao Andraharo, kely na lehibe. Renim-pianakaviana 50 notolorana vary, menaka, siramamy, sira, zava-pisotro avy amin’ny Star, izay miara-miasa amin’ny Novo-comm hatry ny ela. Fanampin’izany ireo kilalao samihafa ho an’ny ankizy 50 mahery.
Tsy nampoizin’ny sasany izao fanampiana izao ka efa nampitony ny sain-janany ny amin’ny tsy fahazoana kilalao. « Tsy nampoiziko izao fanomezana izao ka faly ny zanako », hoy ny renim-pianakaviana iray. Amin’izay hetsika rehetra ataon’ny fikambanana, manantena ireo mpikambana handraisan’ny hafa andraikitra hitodika amin’ireo mpiara-monina akaiky, hanampy azy ireo araka izay tratra, hanome fanantenana ireo « Hadino » amin’ny fiaraha-monina, nefa koa ireto farany tsy miandry fanomezana hatrany fa vonona miatrika ny fiainana.
Iray volana mialoha, nanao antso ho an’izany fanomezana izany ireo mpikambana, nahazoana fanomezana avy amin’ireo ny mpiara-miombon’antoka amin’ny Novo-comm, avy amin’ireo mpikambana ihany, ny fianakaviany, sy ny namany. Ny andrasana ny valin’ny ady amin’ny fahantrana. Izay no tena fanampiana maharitra. Samy manana adidy amin’izany ny rehetra, manomboka amin’ny fitondram-panjakana.